Walgahiin NATO jalqabameeraa
Ministeerri Ittisaa Yunaayitid Isteets Lloyiid A’ustiin walgahii ministeerotaa biyyoottan miseensaa NATO irratti argamuudhaaf Biyya Beeljiiyeem magaala Braaseels keessa jiruu. Lloyiid A’ustin marii walgahii waltii dhufeenyaa biyyoottan 30 hogganu jedhameera.
Barreesaa ol aanaan NATO Jeens Stooltenberg kaayyoon walgahii NATO kun, akkaataa dhimmaa nageenyaa irratti jijjirama taasisuudhaan Weerara Raashaan Yukireen irratti raawwateef fuul duratti deebii kennamuu danda’u irratti dubbachudhaaf akka ta’e ibsaniiru.
Waggoottan dhihoo kana keessa NATOn Biyyoottan Baaltiik jedhamanii waamaman , Estooniyaa, Laativiyaa, Litihuniyaa fi Poolaand keessatti umnna waraana kuma 5000 bobbaasee jira.
Karaa biraatiin prezidaantiin Yunaayitid Isteets Joo Baayiden akkataa yaaliin ittisaa biyyoottan miseensa NATO qindaa’uu qabu irratti maryachuudhaaf gara Braaselsitti akka imalan ibisii masaraa Waayiit Haahus irraa baye beeksisuun isaa beekameera. Walgahiin biyyoottan miseensa NATO Bitootessaa 24/2022 Braasels keessatti taasisuuf deeman ji’a tokkofaa weerara Raashaan Yukireen irratti jalqabdee sababeeffachuudhaan akka ta’e ibsameera.